यो साल बालबालिकालाई स्कूल नपठाए के हुन्छ ? – sunpani.com
यो साल बालबालिकालाई स्कूल नपठाए के हुन्छ ?
सुनपानी । ११ मंसिर २०७७, बिहीबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सर्कुलर गरेको ५ बुँदे परिपत्रको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरुलार्ई विद्यालय पढाउने सम्बन्धमा अभिभावकलाई दबाब नदिने ।’
यसको मतलव के अभिभावकहरु यो सिजनमा आफ्ना बालबालिकालाई स्कूल नपढाउने मनसायमा छन् त ? शैक्षिक सत्रको आधा बढी समय गइसकेको र कोरोना कहर बाँकी नै रहेकाले अभिभावकमा यस्तो सोचाई आउन सक्छ । हुन पनि कतिपयले आफ्ना बालबालिकालाई स्कूल भर्ना गरिसकेका छैनन् ।
एक सिजन बालबालिकालाई स्कूल नपढाए के हुन्छ ? बालबालिका एक वर्ष पछाडी पर्छन्, सिधा जवाफ यस्तो आउन सक्छ । केही अभिभावक जोखिम मोल्न चाहन्नौ भनिरहेको सुनिन्छ । यस्तो चर्चा परिचर्चाका बीचमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा स्कूल खोल्ने अन्तिम चरणका प्रक्रिया चलिरहेका छन् ।
स्कूलहरुले अभिभावकलाई बोलाएर छलफल चलाएका छन् । अभिभावकको स्वीकृति र स्कूलले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दा स्कूल खोल्न पाउने भएका छन् । उपमहानगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्दा स्कूल खुल्छन् । यस्तोमा स्कूलले मंसीरदेखि मात्रै शुल्क लिन पाउँछन् । यस्तोमा दुई÷तीन महिनादेखि नै भर्ना गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेका र शुल्क लिइरहेका स्कूलका हकमा के हुन्छ ? उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा पनि सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।